भारतको डिफेन्स कलेजको प्रतिनिधिमण्डल नेपालमा
काठमाडौं, १३ भदौ । भारतको डिफेन्स कलेजको ५९ औं कोर्षका एक प्रतिनिधिमण्डल यतिवेला नेपाल भ्रमणमा छ । १५ जना उच्च सरकारी तथा गैर सरकारी उच्च
आणविक युद्धको चेतावनी दिएको पाकिस्तानले गजनवी मिसाइल परीक्षण गर्दै
भारत सरकारले जम्मू कश्मीरबारे निर्णय गरेपछि एकातिर पाकिस्तानले विश्वव्यापी सेनासँग लबिङ गरिरहेको छ । अर्कोतर्फ भारतले चेतावनी दिइरहेको छ । काश्मिरको बारेमा विश्वव्यापी फोरममा प्रायः अलग्गिएको पाकिस्तानले अब बैलेस्टिक मिसाइल
मोरङ । प्रहरीले पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाह–१ बाट विराटनगरका विभिन्न स्थानमा डाँका गरेको अभियोगमा ११ भदौं दिउँसो ७ जनालाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरीले भारत बिहार मधुवनी बस्नेहरु ३५ वर्षीय धर्मेन्द्र
१५ वर्षिय बालिकालाई सामुहिक बलतकार र बेइज्जत गर्ने सातजना पक्राउ
काठमाडौँ । उत्तरपूर्वीय भारतका बिहारमा १५ वर्षिय बालिकालाई सामुहिक बलत्कार गरी सार्वजनिक तवरले नै लज्जित तुल्याएको आरोपमा ७ जनालाई प्रहरीले हिरासतमा लिएको छ । पिडितलाई सात जना पुरुषले अगस्ट १४
संविधानमा भारत मौन, काश्मिर मामलामा नेपाल मौन: कहाँ पुग्यो नेपाल—भारत सम्बन्ध ?
दीपेश केसी: भारतीय विदेशमन्त्री सुव्रमण्यम जयशंकरले गएको हप्ता बँगलादेश भ्रमण गरे । जयशंकरको भ्रमणलगत्तै बँगलादेशले जम्मू काश्मिर मामलामा भारतको कदमबारे औपचारिक धारणा सार्वजनिक ग¥यो । उसलाई संविधानबमोजिम दिदै आएको विशेष
अरुण जेट्लीको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि
भारतका पूर्ववित्तमन्त्री अरुण जेट्लीको अन्त्येष्टि गरिएको छ । उनको २५ अगष्टमा दिल्लीमा अन्त्येष्टि गरिएको हो । भारतीय जनता पार्टीको मुख्यालयबाट जेट्लीको पार्थिव शरीरलाई फूलमालासहित अन्त्येष्टिस्थल निगमबोध घाटमा लगिएको थियो ।
करोडौ मुल्यको रक्तचन्दन कुहिंदै
ताप्लेजुङ । भारतबाट नेपालको बाटोहुँदै चीन भित्र्याउन लागेको करोडौं मुल्य बराबरको रक्तचन्दन ११ बर्षदेखि डिभिजन वन कार्यालयको गोदाम भित्रै कुहिने अवस्थामा थन्किएको छ । २०६५ सालमा भारतबाट ताप्लेजुङ हुदै चीनको
राहुल गान्धीलाई काश्मिरमा रोक
भारत सरकारले काश्मिरको एयरपोर्टबाहिर जान खोज्ने राजनीतिक व्यक्तिहरुलाई प्रवेश गर्न दिएको छैन । एकपछि अर्को नेताहरुलाई एयरपोर्टबाट फर्काउने क्रम चलिरहँदा २४ अगष्टमा कँग्रेस आईका नेता राहुल गान्धी फर्काइए । काश्मिरको
काश्मीर मामलामा फ्रान्सको समर्थन भारतलाई देखियो
फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग काश्मिरको बारेमा छलफल गरिसकेका थिए । उनले यस मुद्दामा कसैले पनि हिंसा जगाउन नहुने कुरामा जोड दिँदै स्थिरता ल्याउन आग्रह गरेका थिए
भारतीय पूर्वअर्थमन्त्री जेट्लीको निधन
काठमाडौं, ७ भदौ । भारतका पूर्वअर्थमन्त्री अरुण जेटलीको आज (शनिबार) दिउँसो निधन भएको छ । शनिबार दिल्लीस्थित एम्स अस्पतालमा उपचारका क्रममा जेटलीको निधन भएको हो । जेटली १५ दिन अघि
“भारतलाई पञ्चेश्वर परियोजना गरौं कि नगरौं भन्ने दोमन छ”
पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी बौद्धिक नेता हुन् । लामो राजनीतिक अनुभव सँगालेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संयुक्तका अध्यक्ष लोहनीसँग नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली बहसका लागि ऋषि धमलाले गरेको कुराकानी हिजो
भारतका पूर्व गृह तथा अर्थमन्त्री चिताम्बरम पक्राउ
कँग्रेस आईका प्रभावशाली नेता पी चिताम्बरम लेखन क्षेत्रमा उत्तिकै दख्खल राख्थे । उनको लेख इन्डियन एक्सप्रेसमा नियमित रुपमा छापिन्थ्यो । तर, चिताम्बरम २१ अगष्टमा नाटकीय शैलीमा पक्राउ परे । रातको